ज्योतिष अनुसार शेयर बजारमा सफल हुन सक्ने योगहरु - Entertainment Khabar
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ०५, २०७८ समय: ७:४५:५२
आजको युगमा धनको चाहना कसलाई पो हुँदैन र ? प्रत्येक व्यक्ति सकेसम्म धेरै पैसा कमाउन चाहन्छ र यसका लागि उसले विभिन्न उपायहरू अपनाउँछ। यसैमध्ये कतिले शेयर बजारमा पनि लगानी गरेका हुन्छन् । तर यसबाट धेरै व्यक्तिले उचित सफलता प्राप्त सक्दैनन् र भएको पैसा पनि गुम्छ। तर यदि तपाईं ज्योतिष शास्त्रमा विश्वास राख्नुहुन्छ भने तपाईंले ज्योतिष शास्त्र अनुसार शेयर बजारबाट लाभ लिन सकिन्छ कि सकिंदैन र कुन समयमा लगानी गर्दा राम्रो होला ? भन्ने विषयमा जानकारी लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ।
कुण्डलीमा रहेको हुन्छ शेयर बजारमा सफल वा असफल हुने योगहरु
कसैको कुण्डलीमा लाभदायक र हानिकारक ग्रहहरूको उपस्थिति यस क्षेत्रमा निर्णायक हुन सक्छ। जब तपाईंको कुण्डलीमा लाभदायक ग्रहहरू भन्दा हानिकारक ग्रहहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तब ज्योतिषीसँग परामर्श लिन अपरिहार्य हुन्छ। शेयर बजार ज्योतिषमा राहुले धेरै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। किनभने राहु लगानीकर्ताको सफलता वा असफलताको निर्णायक तत्व हो।
कुनै पनि व्यक्तिको जन्म कुण्डलीमा, दोस्रो घर र त्यस घरको मालिकले धनको बिषय व्यक्त गर्दछ। पाँचौं घर र यसको मालिकले शेयर बजार, सेयर व्यापार वा लटरी मार्फत लाभ आदिको प्रतिनिधित्व गर्छ। आठौं घर र यसको मालिकले अचानक लाभलाई दर्शाउँछ। दशौं घर र यसको मालिकले पेशाको भविष्यवाणी गर्छन् भने एघारौँ घर र यसको मालिकले धन र लाभको प्रतिनिधित्व गर्छन् । जबकि छैठौं र बाह्रौं घर र तिनीहरूका मालिकहरूले घाटा, नोक्सान वा खर्च आदिको प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।
त्यसोभए शेयर बजारमा नाफा कमाउनको लागि कुण्डलीमा ग्रहको स्थिति कस्तो हुनु पर्छ त ?
जन्मकुण्डलीको एघारौँ घरमा केतुको उपस्थितिले चिट्ठा र व्यापारबाट धन ल्याउँछ।
यदि आठौं घरका स्वामी केतुको साथमा दोस्रो घरमा अवस्थित छन् भने यो अचानक पैसा आउने संकेत हो।
दोस्रो, पाँचौ र एघारौँ घर मालिकको संयोजनले शेयर बजारमा प्राकृतिक रूपमा नाफा कमाउन मद्दत गर्दछ।
दोस्रो, चौथो, नवौं र एघारौँ घरको मालिक ग्रह नकारात्मक प्रभावबाट टाढा रहनु वा ती ग्रहहरु बलियो रहेर कुण्डलीको राम्रो भावमा रहनु शेयर बजारमा सफलताको सम्भावना बढ्नु हो ।
दोस्रो घरमा मंगल र राहुको स्थिति र एघारौँ घरमा बृहस्पति वा शुक्र रहनुले शेयर बजारमा राम्रो भाग्य निम्त्याउँछ।
जब पाँचौं र नवौं घरको मालिकले दोस्रो, पाँचौं, आठौं, नवौं र एघारौं घरको स्वामीसँग सम्बन्ध बनाउँछ तब धन योग बन्छ।
दोस्रो र एघारौं घरका स्वामीहरूको पाँचौं र नवौं घरका मालिकको साथ सम्बन्ध शेयर बजारमा उत्कृष्ट सफलता दर्शाउँछ।
यदि दोस्रो र एघारौं घरका मालिकले एक अर्कासँग राशि परिवर्तन गरेर बसेका छन् भने यसले शेयर बजारमा सफलताको संकेत दिन्छ।
यदि बृहस्पति उदीयमान छ र दोस्रो, पाँचौं र नवौं घरका मालिकले बृहस्पतिलाई देख्छन् भने शेयर बजारमा लाभको आशा गर्न सकिन्छ।
चन्द्रमा र मंगल ग्रहको साथमा राहु र बुध एघारौं घरमा छन् भने त्यस व्यक्तिलाई शेयर बजारबाट सफलता प्राप्त हुन सक्छ।